F.lọ Ọrụ Robert F. Kennedy Timgwọ Ọrụ Tim Cook Maka Ọrụ Ya | Esi m mac
Robert F. Kennedy Human Rights Foundation na-ewetara Tim Cook onyinye “Ripple of Hope”
Apple CEO Tim Cook ga-anakọta onyinye enyemaka sitere na nzukọ hiwere nsọpụrụ nke otu n'ime ndị dike ya, Robert F. Kennedy.
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights ga-enye Tim Cook onyinye Ripple of Hope Award, ya bụ, ihe dịka onyinye "Ray of Hope". Disemba 8 bu ubochi ahoputara ime emume a na ịmata ọrụ ha na-akwado mgbanwe nke ọha mmadụ nke ga-eme na New York Hilton nke di na obi Manhattan.
Ndi mmadu ndi ozo dika onye omekorita John Lewis, ga-aga akwukwo a. Georgia Democrat na onye mmume n'oge ikike ndị ruuru mmadụ na 1960. A ga-enwekwa onye na-arụkọ ọrụ na Evercore na onye bụbu Secretary Treasury Roger Altman na onye nnọchi anya UNESCO Marianna Vardinoyannis.
Onye isi Apple ghọrọ ihe siri ike na-akwado ịha nhatanha n'ebe ọrụ, na-arụ ụka na ụlọ ọrụ na-erite uru mgbe ndị ọrụ ha ọ na-adị ha ka a matara ha nke ọma. N'okwu nke ya edepụtara na akwụkwọ akụkọ Wall Street Journal:
Na Apple, anyị na-agba mbọ hụ na ndị mmadụ ghọtara na ha ekwesịghị igosipụta njirimara ha ozugbo ha gafere n'ọnụ ụzọ […] mba ma ọ bụ agụụ mmekọahụ.
Tim Cook, onye gosipụtara n'ihu ọha n'afọ gara aga na ọ bụ nwoke nwere mmasị nwoke, katọrọ iwu "nnwere onwe okpukpe" Indiana nke a na-atụ egwu ga-eduga na ịkpa ókè megide nwoke na nwanyị. Ndị omebe iwu nke steeti mechara mezie iwu ahụ iji gbochie ịkpa oke na-adabere na njiri onwe onye ma ọ bụ njirimara nwoke.
Ugbua mbido afọ a, enyere Cook aka na 'Visibility Award from the Human Rights Campaign », nzukọ LGBT kachasị ukwuu Ikike ndi mmadu na US
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Robert F. Kennedy Human Rights Foundation na-ewetara Tim Cook onyinye “Ripple of Hope”
OS X El Capitan 5 beta 10.11.2 dị maka ndị mmepe na ndị na-anwale ọhaneze
Kwalite RAM na Mac Mini